Nahoana ary Ahoana no Oysters ho perla - News Fitsipika
Nahoana ary Ahoana no Oysters ho perla
Oysters manao perla toy ny hiaro tena amin'ny vahiny zavatra.
Ny dingana dia manomboka rehefa avy any ivelany ny sasany vatana, toy ny fasika, ny katsentsitra na zavatra organika hafa, mitantana mba hanao ny lalana ao anatin'ny oyster ny akorany, ary tonga ao amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny lamba, ny sosona izay miaro ny oyster ny taova, indraindray manimba mihitsy aza izany.
Ny oyster ny tena mahita ny nanafika fananana ho toy ny mety ho loza mitatao, ary ho valin ny lambany manomboka ny hametraka ny fananana antsoina hoe nacre, koa hoe reny ny perla, tao izany. Izany no fananana ihany izay akanjo ny efitra anatiny amin'ny akora.
← Mark Zuckerberg lasa fahenina-olona manan-karena indrindra eto an-tany Inona no afany elefanta dia mampianatra antsika momba ny evolisiona →